सेतो पत्थर - तपाईंको घरको लागि तारा उत्पादन | बेजिया
सेतो पत्थर: तपाईंको घरको लागि तारा उत्पादन
सुसाना Godoy | 13/01/2022 14:00 | घर
के तपाईलाई सेतो पत्थर थाहा छ? पक्कै पनि तपाईंले यसको बारेमा सुन्नु भएको छ, किनभने यो हाम्रो घरको लागि आवश्यक छ। तर यदि तपाइँ यसलाई विश्वास गर्नुहुन्न भने, जब तपाइँ यसको सबै फाइदाहरू जान्नुहुन्छ, यदि तपाइँसँग पहिले नै छैन भने तपाइँ यसको लागि बाहिर जानुहुन्छ। कहिलेकाहीँ यो सत्य हो कि हामी प्रत्येक सतहको लागि विशिष्ट उत्पादनहरू खोज्छौं। तर, सबै कुरा एउटै भएकोमा के सोच्नुहुन्छ?
यो त्यस्तै हो यसले हामीलाई घर र आर्थिक क्षेत्रमा दुबै ठाउँमा बचत गर्नेछ। त्यसोभए, हामी अब सेतो ढुङ्गामा भएका सबै फाइदाहरू पत्ता लगाउन सुरु गर्न सक्छौं र यसलाई कसरी सबैभन्दा बढी फाइदा लिन प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामी तपाईंलाई सबै कुरा बताउँछौं ताकि तपाईंले विवरण नगुमाउनुहोस्!
1 सेतो ढुङ्गाले के सफा गर्न सकिन्छ
2 कसरी सेतो पत्थर प्रयोग गरिन्छ
3 यो सफाई उत्पादन के बनेको छ?
4 पत्थर को महान लाभ
सेतो ढुङ्गाले के सफा गर्न सकिन्छ
यहाँ हामीले लगभग, लगभग आफैलाई उल्टो प्रश्न सोध्नु पर्छ: यो के हो जुन सेतो ढुङ्गाले सफा गर्न सकिँदैन? किनभने सत्य यो हो कि जब हामी हाम्रो घर सफा गर्ने बारे सोच्दछौं, यस प्रकारको प्राकृतिक उत्पादन सतहहरूको विशाल बहुमतमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तसर्थ, दुबै प्लास्टिक र इनामेल वा स्टेनलेस स्टील यसलाई सफा गर्न सकिन्छ। तर यो पनि हो, यो चाँदी, तामा र क्रिस्टलको लागि उपयुक्त हुनेछ। थप रूपमा, भान्साकोठामा हामी सिङ्क र सिरेमिक हब र संगमरमर वा ग्रेनाइट दुवै सफा गर्न सक्छौं।। यो बाथरुम र नलका लागि पनि उपयुक्त छ, साथै खियाको दाग हटाउनको लागि। त्यसैले यसलाई प्रयोग गर्न नडराउनुहोस्, विशेष गरी ती ठाउँहरूमा जुन आधारभूत सफाईले तिनीहरूलाई प्रतिरोध गर्न सक्छ।
कसरी सेतो पत्थर प्रयोग गरिन्छ
यो साँचो हो कि त्यहाँ धेरै विकल्पहरू हुनेछन्, तर केहि सबैभन्दा आधारभूत व्यक्तिहरू सामान्यतया सफा गर्नको लागि स्पन्जको साथ आउँछन्। हामीले यो स्पन्जलाई भिजाउनु पर्छ र यसलाई राम्रोसँग निकास गर्नुपर्छ। त्यसपछि, हामी यसलाई सेतो ढुङ्गाबाट पार गर्नेछौं र त्यसपछि उपचारको लागि सतहमा। सामान्य नियमको रूपमा, यो धेरै रगड्नु आवश्यक पर्दैन। तपाईंले सतहलाई राम्ररी गर्भाधान गरिसकेपछि, उत्पादनको बाँकी नभएसम्म ओसिलो कपडाले हटाउनुहोस्। आवश्यक चमक प्राप्त गर्न, सफा र सुक्खा कपडा लिनुहोस्, हामीले सफा गरेको ठाउँबाट फेरि जानुहोस्। तपाईले देख्नुहुनेछ कि यो कसरी चम्किलो देखिन्छ र हामीले उल्लेख गरे अनुसार ठूलो प्रयास नगरी। साथै, याद गर्नुहोस् कि तपाईलाई उत्कृष्ट परिणामहरू हेर्नको लागि धेरै उत्पादनको आवश्यकता पर्दैन। थोरै रकमले मात्रै पाउनुहुनेछ। यसले यसलाई तपाईले सोचेको भन्दा धेरै लामो बनाउँछ।
यो सफाई उत्पादन के बनेको छ?
हामी ढुङ्गालाई लगभग चमत्कारी चीजको रूपमा बोल्छौं। यस कारणले, हामी सधैं सोच्न सक्छौं कि कुनै प्रकारको घटक यसको सामग्रीहरू बीच लुकेको छ, विशेष भनौं, र सत्यबाट केहि पनि छैन। किनभने यदि तपाइँ यो के बनेको छ भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाइँलाई त्यो बताउनेछौं यसमा तपाईले सेतो माटोका साथै पानी र साबुन पाउनुहुनेछ, तरकारी ग्लिसरीन र सोडियम कार्बोनेट मार्फत जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईलाई घर छोड्नको लागि सफा बाहेक अरू केहि आवश्यक पर्दैन। यो एन्टी-ब्याक्टेरियल पनि हो, त्यसैले हामीले सोचेको भन्दा पनि सफाइ गहिरो छ। यसमा कुनै पनि प्रकारको विषाक्त तत्व हुँदैन, त्यसैले यसले छालालाई जलन पनि गर्दैन।
पत्थर को महान लाभ
अनिवार्य रूपमा हामीले तिनीहरूलाई विस्तारै उल्लेख गर्दै आएका छौं। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू मध्ये एक यो हो कि हामी यसको साथ हाम्रो घरको सबै सतहहरू सफा गर्न सक्छौं। यदि हामीले राम्ररी पखाल्यौं भने दागहरू स्क्र्याच गर्दैन वा छोड्दैन र यो छ कि यसको अतिरिक्त, चमक लगभग जादू द्वारा देखा पर्नेछ। यो धेरै लामो समयसम्म रहन्छ र यसको मूल्य हाम्रो लागि भण्डारमा भएका सबै फाइदाहरूको लागि एकदम कम छ। यो धेरै जटिल दागहरूसँग धेरै कुशल छ, तपाईंको घर लामो समयसम्म सफा राख्छ। थप रूपमा, तिनीहरूमध्ये केहीमा कागतीको सुगन्ध छ जसले तपाईंको घरलाई त्यो सफा भावनाको साथमा पार्नेछ। तपाईंले प्रयास गर्नुभयो?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » घर » सेतो पत्थर: तपाईंको घरको लागि तारा उत्पादन
Surimi के हो र यो के बनेको छ?
यी हुन् २०२२ गोल्डेन ग्लोब्समा पुरस्कृत श्रृंखलाहरू